War-murtiyeed 14 Qodob ah oo laga Soo Saaray Shirkii Tignoolajiyadda #ICT-ga Somaliland ee 2020. |
War-murtiyeed 14 Qodob ah oo laga Soo Saaray Shirkii Tignoolajiyadda #ICT-ga Somaliland ee 2020.
Hargeisa(GNN):-Shirka Tignoolajiyadda iyo horumarinta Isgaadhsiinta Jamhuuriyadda Somaliland #ICT-ga Somaliland ee 2020@, ayaa gelinkii dambe ee Axadda maanta la soo gebo-gabeeyey, ka dib markii uu muddo laba maalmood ah ka socday Huteel Grand Haadi Hotel ee magaalada Hargeysa.
shirka #ict somaliland 2020
Shirka oo uu Sabtidii shalay furay Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici), isla markaana ay ka qaybgaleen Wasiirro Xukuumadda ka tirsan, Agaasimeyaal guud, Madaxda Shirkadaha Isgaadhsiinta, ku-xigeenka Wakiilka Dowladda Tiwain u fadhiya magaalada Hargeysa ee Somaliland, Aqoonyahanno, Khuboro Tignoolajiyadda ku xeel-dheer, mudan iyo marti-sharaf kale, ayaa gebo-gabadiisii waxa laga soo saaray War-murtiyeed 14 qodob ka kooban.
Waxa uu Shirkan #ICT-ga Somaliland ee 2020, noqonayaa Shirkii labaad ee sidan oo kale ah ee ay sannadkii labaad oo xidhiidh ah qabato Wasaaradda Isgaadhsiinta iyo Tignoolajiyadda Somaliland, halka ay agaasinka Shirka fulinaysay Shirkadda Wadaag, ayaa War-murtiyeedka ka soo baxay oo uu akhriyey Wasiirka Isgaadhsiinta iyo Tignoolajiyadda Somaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi Jibriil, waxa nuqul ka mid ah oo ay warbaahinta aftahannews.com heshay u dhignaa sidatan ee ka bogasho habboon:-
“Si kor loogu qaado loona xoojiyo mustaqbalka tiknoolajiyadda qaranka waxa markii labaad Wasaaradda Isgaadhsiinta iyo Tiknoolajiyaddu soo qabanqaabisey Shirweynihii qaran ee tiknoolajiyadda (ICT-da) oo ujeedooyinka ugu waaweyni ay yihiin sidii daneeyayaasha tiknoolajiyaddu (ICT-gu) uga wada hadli lahaayeen ‘qaabaynta Mustaqbalka tiknoolajiyadda (ICT-ga) Qaranka’.
Shirkani wuxu isku keeney in ka badan 350 qof oo iskugu jira madaxda dawladda, shirkadaha Isgaadhsiinta, shirkadaha sameeya nidaamyada kala duwan (software developers), shirkadaha ka ganacsada agabka tiknoolojiga, shirkadaha bixiya adeega tiknoolajiga, madaxda jaamacaddaha dalka, aqoonyahanada, xirfadlayaasha iyo ardeyda jaamacaddaha.
Haddaba, shirkan oo socdey laba maalmood qodobdii ka soo baxay waxa ka mid ahaa:
Deegaamaynta aqoonta ICT-ga
Samaynta siyaasad lagu yaraynayo farqiga tiknoolaji ee u dhaxeeya qaybaha bulshada (narrowing the disparity gap brought by the digital divide).
In dhalinyarada leh hal-abuurka ICT-ga hesho meel/goob ay ku kobciyaan xirfadooda aqooneed (Xarunta Hal-abuurka ICT-da).
In ay dhalinyarada Hal-abuurka lehi ay helaan maalgalin (Sanduuqa maalgalinta ICT-ga)
In la sameeyo shuruuc ilaalinaysa fikrada hal-abuurka tiknoolajiga (ICT) ee qofka la yimaado.
In ardayda dugsiyada sare dhigataa ay helaan aasaasiyaadka ICT-ga (In curriculam-ka dugsiga sare lagu daro maadada IT-ga).
In tartammo loo qabto dhalinyarada leh hal-abuurka ICT-ga
In barnaamijyo wacyigalineed laga sameeyo isticmaalka tiknoolojiyadda si kor loogu qaado u adeegsiga tiknoolajiyadda dhinaca togan.
In la sii xoojiyo fursadihii ka dhashey Adeegsiga tiknoolajiyadda covid-19
In la tayeeyo manhajka ICT-ga iyo in kor loo qaado kaabayaasha ICT-ga ee jaamacaddaha (in iskaashi lagu sameeyo sidii loo buuxin lahaa kaabayaasha ICT ee jaamacaddaha)
In kor loo qaado aqoonta ICT-ga ee Haweenka.
In la xoojiyo iskaashiga u dhaxeeya daneeyayaasha ICT-ga Somaliland.
In sare looqaado aqoonta aasaasiga ah ee tiknoolajiyadda (ICT literacy).
In la kordhiyo adeegyadda ay dawladdu ku bixiso si electronic ah.” Sidaa ayaa lagu yidhi War-murtiyeedka ka soo baxay gunaanadka Shirka ICT-ga Somaliland ee sannadkan dhammaanaya ee 2020-ka ka qabsoomay Hargeysa.
Halkan ka Daawo Warka oo Muuqaal ah:-